Baume molotra vita ao an-trano
Tsy amin’ny hatsiaka ihany no mety hahamaina be ny molotra fa tena mitranga koa izany rehefa mafana be toy izao ny andro.
Tarehy be menaka, fadio ireto…
Mora ipoiran’ny mony sy ny “points noirs” ary tena mora mitera-menaka be mihitsy ny sokajin-koditra matavy. Noho izay indrindra dia samy miezaka mikolo ny tarehiny, araka izay fahaizany azy ny olona manana io karazan-koditra io.
Raha vao tsy karakaraina matetika ny hoditra amin’ny tongotra dia mihamatevina sy mamorona faritra mihamafy. Mahavara isa-kerinandro, mandona ny tongotra amin’ny ranon-tsira matimaty, mandritra ny 20 minitra. Hamainina avy hatrany dia hosorana menaka manamandina ary fonosina amin’ny ban-kiraro mandritra ora iray, na alina iray.
“Coupe-ongle” lava no ampiasaina. Ahitsy hifanaraka amin’ny firafitry ny rantsan-tongotra ilay hoho ary omena endrika araka izay hitiavana azy. Ranitina amin’ny « lime » izany avy eo.
Manosotra « vernis »
- Rehefa afa-po tsara tamin’ny fanamboarana hoho dia hosorana « vernis » amin’izay. Ny « base » no ahosotra voalohany. Na tsy tia manao « vernis » aza dia ilaina ny manosotra « base », hiarovana azy. Sady miaro ny hoho mantsy no asan’ny “base” no mampitazona ny “vernis” ahosotra ao aoriany.
- Hosorana an’izay loko tiana amin’izay. Atao indroa mihosotra izany ka rehefa voahosotra indray mandeha avokoa ny rantsana rehetra ary maina tsara, izay vao alefa ny manaraka.
- Azo atsofoka ao anaty rano mangatsiaka amin’izay ny tongotra mba hahamaina vetivety ireo “vernis”.
Ora iray ao aorian’ny nanosorana “vernis”, sy isan’andro avy misasa, dia hosorana menaka manamandina foana ny rantsa-tongotra sy ny elakelany rehetra. Tandrovy mba halefaka foana ny hodi-tongotra sy ireo manamorona ny hoho, mba ho salama sy ho mora koloina ny tongotrao.